मलाई ओली समूहमा गयो भन्दा हाँसो उठ्योः हरिबोल गजुरेल - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेकपामा केही समयदेखि विवाद चलिरहेको छ । पटक–पटकको सचिवालय बैठकपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा गएको नेकपा विवाद पुनः स्थायी कमिटीमै गएर अड्किएको अवस्था छ ।
न त सचिवालय बैठकले नै निकास दिइरहेको छ न त स्थायी कमिटीले नै । विवाद टुङ्गिने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा अब के हुने हो ? भन्ने अन्यौलता सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीति भने मज्जाले तातेको देखिन्छ ।
अहिले नेकपाभित्र दुई धार स्पष्ट देखिएको छ । एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको एउटा धार छ भने अर्को प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओली नेतृत्वको धार रहेको छ । यी दुई धारमा दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरू को कतातिर छन् भन्ने कुराले पनि फेरि राजनीतिमा थप रोमाञ्चकता पैदा गरिरहेको छ ।
यस रस्साकस्सीमा पूर्व एमालेको नेपाल र खनाल समूह प्रचण्डको नेतृत्वमा छ । त्यस्तै, पूर्व माओवादीका एक दुई जना स्थायी कमिटी सदस्य ओलीसँग निकट रहेको समाचार बाहिर आइरहेको छ । जसमध्ये एक हुन्, प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिएका हरिबोल गजुरेल ।
केही दिनअघि हरिबोल ओलीको समुहमा रहेको र ओलीकै सल्लाहबमोजिम गजुरेलले प्रचण्डमाथि प्रहार गर्ने गरेको ओली निकट केही मिडियाले प्रचार गरेका थिए । तर, गजुरेल भने उक्त प्रचार देखेर आफूलाई हाँसो उठेको बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस पार्टीमा अब कुनै कन्फ्युजन छैन, बाटो साफ छः अध्यक्ष प्रचण्ड
उनले भने, ‘अचम्म चाहीँ कहाँ नेर लाग्यो भने माया गर्ने व्यक्तिलाई कहिले काहीँ सल्लाह त दिइन्छ नि, तर यहाँ त स्वार्थी टिमले खेल्न खोजि हालेछ भनेर हाँसो उठ्यो एकछिन हाँसे पनि म ।’
प्रचण्ड–हरिबोलको सम्बन्धका बारेमा जानकारहरू भन्छन् ‘इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने दुःखमा टाँढिने र सुःखमा निकट हुने सम्बन्ध होइन उहाँहरूको । आफ्नो जीवन नै दिएका शितलकुमार अहिले टाँढिए भनेर कुप्रचार गर्नेहरू गद्दार हुन् यो उहाँहरूमाथि गरिएको अन्याय हो ।’
याे पनि पढ्नुस समाजवाद उन्मुख र न्यायसहितको नयाँ समाज निर्माणको संकल्प गर्न प्रचण्डको आव्हान
हरिबोल अगाडी भन्छन्, ‘सचिवालयको पटक–पटकको बैठक बस्ने तर निकास नदिनेप्रति मेरो हिजोदेखिकै असहमति हो, बैठक स्थायी कमिटीमा गएको छ, जनताको अगाडी लाज भैसकेको छ, महिनौं वित्दा स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको छैन, हामीले लाज मान्ने कि नमान्ने ? विधि, पद्धति र विधान मान्ने कि नमान्ने ? हामीले आउने जेनेरेसनलाई के दिने ? के सिकाउने ? अब ढिला गर्नुहुँदैन ।’
हरिबोल पारिवारिक रुपमा पनि प्रचण्ड परिवारसँग निकट मानिन्छन् । प्रचण्डका छोरीहरू उनलाई काका भनेर सम्बोधन गर्छन् र अभिभावकको रुपमा सम्मान गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
ट्याग्स: केपी ओली, नेकपा, प्रचण्ड, सचिवालय बैठ, स्थायी कमिटी